Iindaba - Iindidi zamandla omoya
Nangona zininzi iintlobo zeeinjini zomoya, zinokushwankathelwa zibe ziindidi ezimbini: ii-injini zomoya ezithe tyaba, apho i-axis ejikelezayo yevili lomoya ifana nomoya oya kwicala lomoya; oomatshini bomoya abathe nkqo, apho i-axis ejikelezayo yevili lomoya ijikeleze emhlabeni okanye kwicala lomoya.
1. I-injini ye-axis ejikelezayo
Ii-injini zomoya ezithe nkqo zahlulwe zaziindidi ezimbini: uhlobo lokuphakamisa kunye nohlobo lokutsala. Uhlobo lomoya ophephezelayo lujikeleza ngokukhawuleza, kwaye uhlobo lokumelana lujikeleza kancinci. Ukuveliswa kwamandla omoya, uhlobo oluphakanyisiweyo lwee-turbine zomoya zisetyenziswa ikakhulu. Uninzi lwee-injini zomoya ezithe tyaba zinezixhobo ezichasene nomoya, ezinokujikeleza kwicala lomoya. Kwiinjini zomoya ezincinci, esi sixhobo sijongana nomoya sisebenzisa umsila wokulawula, ngelixa oomatshini bomoya abakhulu, isixhobo sokuhambisa senziwe ngezinto zomoya ojonga ulwalathiso lweemoto kunye nee-servo motors zisetyenziswa.
Iinjini yomoya enamavili omoya phambi kwenqaba ibizwa ngokuba yi-upwind wind turbine, kwaye i-turbine yomoya enamavili omoya emva kwenqaba iba yi-turbine yomoya oya ezantsi. Zininzi iindlela zeeturbines zomoya ezithe tyaba, ezinye zinamavili omoya aneebhleti eziguqulweyo, kwaye ezinye zixhotyiswe ngamavili omoya amaninzi kwinqaba ukunciphisa iindleko zenqaba phantsi kwemeko yombane othile wemveliso. I-turbine yomoya ye-shaft yenza i-vortex ejikeleze ivili lomoya, igxile ekuhambeni komoya, kwaye inyuse isantya sokuhamba komoya.
2. I-injini yomoya eyi-axis ethe nkqo
I-injini yomoya ethe nkqo ayifuni ukujongana nomoya xa indlela yomoya itshintsha. Xa kuthelekiswa ne-injini yomoya ethe tyaba, kuluncedo olukhulu kule nkalo. Ayenzi lula kuphela uyilo lolwakhiwo, kodwa ikwanciphisa amandla e-gyro xa ivili lomoya lijonge umoya.
Kukho iintlobo ezininzi zeeinjini zomoya ezime nkqo ezisebenzisa ukuxhathisa ukujikeleza. Phakathi kwazo, kukho amavili omoya enziwe ngeepleyiti ezithe tyaba kunye neentsimbi, ezizizixhobo ezinyulu zokumelana; Uhlobo lwe-S-uhlobo lweemoyile zomoya zinokuphakanyiswa ngokuyinxalenye, kodwa ikakhulu zizixhobo zokumelana. Ezi zixhobo zine-torque enkulu yokuqala, kodwa isantya esisezantsi sesantya, kwaye zibonelela ngokuveliswa kwamandla aphantsi kwemeko yesayizi ethile, ubunzima, kunye neendleko yevili lomoya.